जीत्नकै लागि जन्मिएका यी हुन् ३ राशी ! हरेक क्षेत्रमा हुन्छ उनीहरुकै राज ! - Nepal Insider
Home/समाचार/जीत्नकै लागि जन्मिएका यी हुन् ३ राशी ! हरेक क्षेत्रमा हुन्छ उनीहरुकै राज !
जीत्नकै लागि जन्मिएका यी हुन् ३ राशी ! हरेक क्षेत्रमा हुन्छ उनीहरुकै राज !
मेष राशी हुने व्यक्तिहरु अद्भूत क्षमताको धनि हुने गर्छन् । तेज दिमाग भएको आत्माविश्वासमा पनि अन्य राशी भन्दा अगाडी रहेका हुन्छन् । नेतृत्व गर्ने क्षमता प्रचुर मात्रामा रहेकाले ती व्यक्तिहरुले धेरै क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन् । उनीहरु हदै सम्मको दुख गर्न पनि पछि हट्दैनन् । त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको जीत हुन्छ ।
धनु राशीलाई क्रान्तिकारी राशी पनि भनिन्छ । यो राशी भएका व्यक्तिहरु जीवनमा छुट्टै किसिमको अनुशासन अपनाउने गर्छन् । उनीहरुमा बल मात्रै नभएर एकीकृत गर्नमा पनि खप्पिस हुने गर्छन् । उनीहरु आफुमा आएको हरेक दुखलाई चिर्दै जीत हाँसिल गर्नमा अग्रसर रहेका हुन्छन् ।
मकर राही भएका व्यक्तिहरु हरेक प्रकारको प्रतिष्ठित सम्मान, धन वैभव मिल्ने गर्छ । हरेक सफलता आफ्नै प्रयासमा हात पर्न सक्ने प्रभावशाली हुन्छन् । अन्य व्यक्तिलाई छिट्टै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएका यी व्यक्तिहरु सफलता पाउनको लागि जस्तोसुकै दुख र कष्ट गर्न पनि तयार हुन्
गोठमा काम गरिरहेका बेला माथिबाट पहिरो खस्दा पुरिएकी सीताले संसार छाडिन् , लैनो भैँसी सहित बाख्रा र पाडा पनि पुरिए